လုပ်ငန်းရှင် မလုပ်ခင် ဖြေနိုင်ရမယ့် မေးခွန်း ခြောက်ခု – Gentleman Magazine
လုပ်ငန်းရှင် မလုပ်ခင် ဖြေနိုင်ရမယ့် မေးခွန်း ခြောက်ခု
လုပ်ငန်းရှင် မဖြစ်ခင် သင် ဖြေနိုင်ရမယ့် မေးခွန်း ခြောက်ခု
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ဟာ ခုတစ်လော လူပြောများနေပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းတွေ၊ တီဗွီရှိုးတွေ၊ လူမှုကွန်ရက်တွေ၊ အားလုံးမှာ လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ဖို့ ဆောင်းပါးတွေ၊ အစီအစဉ်တွေ မှိုလိုပေါက်နေပါတယ်။ လူတော်တော်များများက အဲဒါတွေကို ကြည့်ပြီး ငါ လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားလာကြတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်ဘဝဟာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဝင်ငွေရပေမယ့် လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နိုင်မယ့် လူမျိုးဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလူဟာ အထက်တန်းကျောင်းသားလေး ဖြစ်နေနိုင်သလို လုပ်ငန်း အရေထူနေတဲ့ ဝန်ထမ်းကြီးတွေလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေအလိုက် သင့်ကိုယ်သင် လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ ပြန်မေးရမယ့် မေးခွန်းတွေ ရှိနေပေမယ့် အောက်ပါ မေးခွန်း ခြောက်ခုကိုတော့ သေချာပေါက် ” Yes ” လို့ ဖြေရမှာပါ။
၁. သင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စွန့်စားချက်တွေ လုပ်ရဲပါသလား
သင် လုပ်ငန်းတစ်ခုစရင် ထည့်တွက်ထားရမှာက သင် ရှုံးနိုင်ပါတယ်။ အကြွေးတွေ တင်နိုင်ပါတယ်။ ရှိသမျှ ကုန်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ ငွေပိုနေလို့ လုပ်တာဆိုရင်တော့ အဲဒီ ပိုငွေနဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ပါ။ အဲဒီနည်းနဲ့ သင် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ ငွေပိုမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အိုင်ဒီယာ ကိုယ်အရမ်းယုံတယ်ဆိုရင်တော့ ခြေစုံပစ်သာ ဝင်လိုက်ပါတော့။
၂. သင့်ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ့် သူတွေ ရှိပါရဲ့လား
စီးပွားရေးခရီးလမ်းက မချောမွေ့ပါဘူး။ လမ်းကြမ်းကြမ်းမှာ လမ်းဆုံလမ်းခွ နေရာတွေ အများကြီး ရှိမှာပါ။ သင့်မှာ မေးခွန်းတွေ အများကြီး ရှိလာမှာပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင် သင့်နောက်မှာ သင့်ကို ကူညီပေးမယ့်၊ မေးခွန်တွေ ဖြေပေးမယ့် ကူညီသူတွေ ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ နည်းပြ၊ စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်တွေ သင့်ဘက်မှာ ရှိနေတာဟာ သင့် အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းကို အများကြီး တိုးတက်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သံသယ ဖြစ်သူတွေကိုတော့ အဝေးမှာပဲ ထားပါ။ သူတို့က အောင်မြင်မှုအတွက် အဆိပ်အတောက်ပါ။
၃. အကြိမ်ကြိမ် ရှုံးနိမ့်ရင် ပြန်ထနိုင်စွမ်း ရှိပါ့မလား
သင် ကျရှုံးဖို့ ရာနှုန်း အရမ်းများပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်သာ အစကတည်းက ရှိသမျှ အကုန် သုံးလိုက်ရင် ဘာမှ ကျန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင် ဘေးရောက်သွားမှာပါ။ သင် စိတ် အရမ်း ပျက်သွားရမှာပါ။
လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ အကြိမ်ကြိမ် ရှုံးနိမ့်ရင်တောင် ပြန်ထလာလိုစိတ် ရှိကြပါတယ်။ James Dyson ဆိုတဲ့ သူဟာ လေစုပ်စက်တွေ တီထွင်ခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ ပထမ ၅၁၂၆ ခါအထိ ပုံစံတွေဟာ ကျရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ၅၁၂၇ ခုမြောက် လေစုပ်စက်ဟာ အမေရိကန်မှာ အရောင်းရဆုံး ဖြစ်သွားပါတယ်။ တကယ်လို့ သူ အကြိမ် ၅၀၀၀ ကျော် ကျရှုံးလို့ အရှုံးပေးလိုက်ရင် သူအခု ဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလျံ ပိုင်ဆိုင်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၄. ရေရေရာရာ အမြတ်မပေါ်သေးပဲ၊ ဇိမ်မခံရသေးပဲနဲ့ သင် ဆက်လုပ်ချင်စိတ် ရှိပါမလား
သင် နေ့တိုင်း ကြမ်းပေါ်မှာအိပ်၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားပြီး အလုပ်လုပ်ရင် ကြိုးစားချင်စိတ် နိုင်ပါ့မလား။ သင့်ကားကို ရောင်းပြီး ဘတ်စ်ကား စီးနိုင်ပါ့မလား။ သင့်လုပ်ငန်း တိုးချဲ့ဖို့ ငွေရင်းဖို့ အိမ်ကို ရောင်းပြီး အခန်းငှါး နေရဲပါ့မလား။ အဲဒါတွေ မလုပ်နိုင်သေးရင် သင် လုပ်ငန်းရှင် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၅. လုပ်ငန်းစလုပ်ကတည်းက သင့် အလုပ်နဲ့ ဘဝ အချိုးမကျပဲ ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ သိပါသလား
အစမှာ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို အချိန်ပိုပေးရလို့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူနဲ့ တွေ့ဖို့ အချိန်တွေကို စတေးရမှာပါ။ သောကြာညတွေမှာ ဘီယာဆိုင်ထိုင်မယ့်အစား အလုပ်က စားပွဲမှာပဲ အိပ်ချင် အိပ်ရမှာပါ။
လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ မွေးဖွားလာကြောင်း သိနိုင်သည့် အချက်များ
လုပ်ငန်းအသစ်စရင် သင် အချိန်နဲ့ ခွန်အားကို လုပ်ငန်းထဲ ထည့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ အားလုံးက သင့်ပခုံးပေါ်မှာပါ။ အဲဒါက တော်ရုံလူ မခံနိုင်တဲ့ ဖိအားပါ။ အချိန်ကြာလာရင်တော့ အလုပ်နဲ့ ဘဝ မျှလာနိုင်ပေမယ့် အစပိုင်း နှစ်တွေမှာတော့ အလုပ်ကို အားထည့်ထားရမှာပါ။
၆. သင့် အောင်မြင်မှုကို ကြိုမြင်ပါသလား
ဒါက အရေးကြီးဆုံးပါ။ သင့်အောင်မြင်မှုကို သင် စိတ်ထဲမှာ မမြင်နိုင်ရင် အောင်မြင်ဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့။ သင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကို မြင်နေဖို့ လိုပါတယ်။ သင် မနက်လင်းရင်လဲ အောင်မြင်မှုကို မြင်ရပြီး ညအိပ်တဲ့အခါရော အိပ်မက်ထဲ ထည့်မက်တဲ့အထိကို သင့်အောင်မြင်မှုဟာ ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေရပါမယ်။
ဘယ်လိုလဲ?? ” Yes ” လို့ ပြောနိုင်ပါပြီလား။
လုပျငနျးရှငျ မဖွဈခငျ သငျ ဖွနေိုငျရမယျ့ မေးခှနျး ခွောကျခု
လုပျငနျးရှငျတဈယောကျ ဖွဈဖို့ဟာ ခုတဈလော လူပွောမြားနပေါတယျ။ စာနယျဇငျးတှေ၊ တီဗှီရှိုးတှေ၊ လူမှုကှနျရကျတှေ၊ အားလုံးမှာ လုပျငနျးရှငျ ဖွဈဖို့ ဆောငျးပါးတှေ၊ အစီအစဉျတှေ မှိုလိုပေါကျနပေါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက အဲဒါတှကေို ကွညျ့ပွီး ငါ လုပျငနျးရှငျ ဖွဈနိုငျပါ့မလားဆိုတာ စဉျးစားလာကွတယျ။
လုပျငနျးရှငျဘဝဟာ ထိုကျထိုကျတနျတနျ ဝငျငှရေပမေယျ့ လုပျငနျးရှငျဖွဈနိုငျမယျ့ လူမြိုးဖွဈဖို့တော့ လိုပါတယျ။ အဲဒီလူဟာ အထကျတနျးကြောငျးသားလေး ဖွဈနနေိုငျသလို လုပျငနျး အရထေူနတေဲ့ ဝနျထမျးကွီးတှလေဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အခွအေနအေလိုကျ သငျ့ကိုယျသငျ လုပျငနျးရှငျဖွဈဖို့ ပွနျမေးရမယျ့ မေးခှနျးတှေ ရှိနပေမေယျ့ အောကျပါ မေးခှနျး ခွောကျခုကိုတော့ သခြောပေါကျ ” Yes ” လို့ ဖွရေမှာပါ။
၁. သငျ ငှကွေေးဆိုငျရာ စှနျ့စားခကျြတှေ လုပျရဲပါသလား
သငျ လုပျငနျးတဈခုစရငျ ထညျ့တှကျထားရမှာက သငျ ရှုံးနိုငျပါတယျ။ အကွှေးတှေ တငျနိုငျပါတယျ။ ရှိသမြှ ကုနျနိုငျပါတယျ။
သငျ့မှာ ငှပေိုနလေို့ လုပျတာဆိုရငျတော့ အဲဒီ ပိုငှနေဲ့ လုပျငနျးလုပျပါ။ အဲဒီနညျးနဲ့ သငျ အောငျမွငျနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့မှာ ငှပေိုမရှိဘူး၊ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့အိုငျဒီယာ ကိုယျအရမျးယုံတယျဆိုရငျတော့ ခွစေုံပဈသာ ဝငျလိုကျပါတော့။
၂. သငျ့ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးမယျ့ သူတှေ ရှိပါရဲ့လား
စီးပှားရေးခရီးလမျးက မခြောမှပေ့ါဘူး။ လမျးကွမျးကွမျးမှာ လမျးဆုံလမျးခှ နရောတှေ အမြားကွီး ရှိမှာပါ။ သငျ့မှာ မေးခှနျးတှေ အမြားကွီး ရှိလာမှာပါ။ အဲဒီလိုဆိုရငျ သငျ့နောကျမှာ သငျ့ကို ကူညီပေးမယျ့၊ မေးခှနျတှေ ဖွပေေးမယျ့ ကူညီသူတှေ ရှိနဖေို့ လိုပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယျခငျြး၊ နညျးပွ၊ စီးပှားရေးအဆကျအသှယျတှေ သငျ့ဘကျမှာ ရှိနတောဟာ သငျ့ အောငျမွငျနိုငျဖို့ ရာခိုငျနှုနျးကို အမြားကွီး တိုးတကျစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သံသယ ဖွဈသူတှကေိုတော့ အဝေးမှာပဲ ထားပါ။ သူတို့က အောငျမွငျမှုအတှကျ အဆိပျအတောကျပါ။
၃. အကွိမျကွိမျ ရှုံးနိမျ့ရငျ ပွနျထနိုငျစှမျး ရှိပါ့မလား
သငျ ကရြှုံးဖို့ ရာနှုနျး အရမျးမြားပါတယျ။ တကယျလို့ သငျသာ အစကတညျးက ရှိသမြှ အကုနျ သုံးလိုကျရငျ ဘာမှ ကနျြမှာ မဟုတျပါဘူး။ သငျ ဘေးရောကျသှားမှာပါ။ သငျ စိတျ အရမျး ပကျြသှားရမှာပါ။
လုပျငနျးရှငျတှဟော အကွိမျကွိမျ ရှုံးနိမျ့ရငျတောငျ ပွနျထလာလိုစိတျ ရှိကွပါတယျ။ James Dyson ဆိုတဲ့ သူဟာ လစေုပျစကျတှေ တီထှငျခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ ပထမ ၅၁၂၆ ခါအထိ ပုံစံတှဟော ကရြှုံးခဲ့ပါတယျ။ ၅၁၂၇ ခုမွောကျ လစေုပျစကျဟာ အမရေိကနျမှာ အရောငျးရဆုံး ဖွဈသှားပါတယျ။ တကယျလို့ သူ အကွိမျ ၅၀၀၀ ကြျော ကရြှုံးလို့ အရှုံးပေးလိုကျရငျ သူအခု ဒျေါလာ ၄.၅ ဘီလြံ ပိုငျဆိုငျနမှော မဟုတျပါဘူး။
၄. ရရေရောရာ အမွတျမပျေါသေးပဲ၊ ဇိမျမခံရသေးပဲနဲ့ သငျ ဆကျလုပျခငျြစိတျ ရှိပါမလား
သငျ နတေို့ငျး ကွမျးပျေါမှာအိပျ၊ ခေါကျဆှဲပွုတျစားပွီး အလုပျလုပျရငျ ကွိုးစားခငျြစိတျ နိုငျပါ့မလား။ သငျ့ကားကို ရောငျးပွီး ဘတျဈကား စီးနိုငျပါ့မလား။ သငျ့လုပျငနျး တိုးခြဲ့ဖို့ ငှရေငျးဖို့ အိမျကို ရောငျးပွီး အခနျးငှါး နရေဲပါ့မလား။ အဲဒါတှေ မလုပျနိုငျသေးရငျ သငျ လုပျငနျးရှငျ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
၅. လုပျငနျးစလုပျကတညျးက သငျ့ အလုပျနဲ့ ဘဝ အခြိုးမကပြဲ ဖွဈသှားမယျဆိုတာ သိပါသလား
အစမှာ သငျ့ရဲ့ လုပျငနျးကို အခြိနျပိုပေးရလို့ မိသားစု၊ သူငယျခငျြး၊ ခဈြသူနဲ့ တှဖေို့ အခြိနျတှကေို စတေးရမှာပါ။ သောကွာညတှမှော ဘီယာဆိုငျထိုငျမယျ့အစား အလုပျက စားပှဲမှာပဲ အိပျခငျြ အိပျရမှာပါ။
လုပျငနျးရှငျဖွဈဖို့ မှေးဖှားလာကွောငျး သိနိုငျသညျ့ အခကျြမြား
လုပျငနျးအသဈစရငျ သငျ အခြိနျနဲ့ ခှနျအားကို လုပျငနျးထဲ ထညျ့ထားဖို့ လိုပါတယျ။ အားလုံးက သငျ့ပခုံးပျေါမှာပါ။ အဲဒါက တျောရုံလူ မခံနိုငျတဲ့ ဖိအားပါ။ အခြိနျကွာလာရငျတော့ အလုပျနဲ့ ဘဝ မြှလာနိုငျပမေယျ့ အစပိုငျး နှဈတှမှောတော့ အလုပျကို အားထညျ့ထားရမှာပါ။
၆. သငျ့ အောငျမွငျမှုကို ကွိုမွငျပါသလား
ဒါက အရေးကွီးဆုံးပါ။ သငျ့အောငျမွငျမှုကို သငျ စိတျထဲမှာ မမွငျနိုငျရငျ အောငျမွငျဖို့ မစဉျးစားပါနဲ့။ သငျ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးကွီးကို မွငျနဖေို့ လိုပါတယျ။ သငျ မနကျလငျးရငျလဲ အောငျမွငျမှုကို မွငျရပွီး ညအိပျတဲ့အခါရော အိပျမကျထဲ ထညျ့မကျတဲ့အထိကို သငျ့အောငျမွငျမှုဟာ ခေါငျးထဲမှာ စှဲနရေပါမယျ။
ဘယျလိုလဲ?? ” Yes ” လို့ ပွောနိုငျပါပွီလား။
Previous: သင့်ရဲ့ ကျားအင်္ဂါမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ကံကြမ္မာ ဆယ်မျိုး
Next: လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့ အဆင့်(၅)ခု